Kpido: email na-anabata » Martech Zone
Tag: email na-anabata
Ịgụ Oge: 2 nkeji Ejighi m n'aka na enwere ihe iwe karịa mmemme email ma hụ na ọ na-arụ ọrụ ma ọ bụ na-edozi ndị niile na ndị ahịa email niile. Lọ ọrụ ahụ kwesịrị ịnwe ọkọlọtọ maka ịrụ ọrụ email dịka ha mechara na ihe nchọgharị. Ọ bụrụ na ị mepee ozi email ọ bụla a haziri nke ọma, na-anabata ozi nke na-adị oke gafee ihe nchọgharị ị ga-ahụ usoro hodgepodge nke hacks iji mee ka ọ na-arụ ọrụ ma na-ele anya dị ka o kwere mee. Na ọbụna mgbe ahụ ị ga
Ịgụ Oge: 2 nkeji Ọ bụ ihe na-awụ akpata oyi n'ahụ mana ọtụtụ ndị na-eji ekwentị ha agụ email karịa ịme oku ekwentị (tinye okwu mkparị banyere njikọta ebe a). Zụta ihe ochie ekwentị ụdị dara site na 17% afọ karịa afọ na 180% ndị ọzọ na-azụ ahịa na-tinye n'ọrụ ha ama ka ịhụchalụ, iyo, na-agụ email karịa ka a afọ ole na ole gara aga. Otú ọ dị, nsogbu bụ na ngwa email adịghị aga ngwa ngwa dị ka ihe nchọgharị weebụ nwere. Anyi ka diri
Ịgụ Oge: 2 nkeji Ka anyị na-achọ imeziwanye njikọ anyị, ihe mbụ anyị mere bụ mejuputa ndebiri ozi nzaghachi na-eji nyiwe anyị, CircuPress, kesaa ọdịnaya ahụ (Debanye aha kwa ụbọchị ma ọ bụ kwa izu). Mgbanwe e nwere n’ọnụ ọgụgụ abụghị obere ihe. Anyị na-eziga ihe karịrị ndị debanyere aha 70,000 na Monday na nchịkọta anyị kwa izu na nchịkọta anyị na-egosi anyị na nke ahụ na-abawanye na okporo ụzọ anyị karịa ihe ọ bụla ọzọ ma ọ bụ nkwalite ọ bụla. O meghị ruo mgbe
Ịgụ Oge: 2 nkeji Mobile, mobile, mobile… ike gwụrụ ya? Echere m na anyị na-arụ ọrụ na usoro mkpanaka na ọkara nke ndị ahịa anyị ugbu a - site na ịmepụta ndebiri email mkpanaka, iji jikọta isiokwu na-anabata, iji wuo ngwa mkpanaka. N'ikwu eziokwu, ekwenyere m na ụlọ ọrụ achụmnta ego na-elele anya na ntanetị ha azụ azụ ebe ọ bụ na ọtụtụ mmekọrịta na ụdị na-amalite ugbu a site na ngwaọrụ mkpanaka - ma na email, mmekọrịta, ma ọ bụ site na weebụsaịtị ha. Ndị ahịa savvy
Ịgụ Oge: <1 nkeji Amachaghị m na ọnụọgụ email ọ bụla na-egosi ebe a dị mkpa maka ịre ahịa email gị, mana ole na ole n'ime ha kwụrụ m nso: Ego Mgbasa Ozi Email bụ ihe ijuanya na ọ dị obere. Ọ na-eju m anya na blọọgụ nke anyị na ịdebanye aha isiokwu ahụ na - ere out mana ọ nweghị onye zụrụ mgbasa ozi na akwụkwọ akụkọ kwa ụbọchị na kwa izu nke ruru ndị debanyere aha 75,000 kwa izu. Email nkuchi bụ na a elu, na